आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (३० वैशाख २०७९ शुक्रबार, १३ मे २०२२) « Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (३० वैशाख २०७९ शुक्रबार, १३ मे २०२२)
३० बैशाख २०७९, शुक्रबार ००:२६
श्रीशाके १९४४ नेपाल सं. ११४२ वसन्त ऋतु वि.सं. २०७९ वैशाख ३० गते शुक्रबार तद्अनुसार सन् २०२२ मे १३ तारिख वैशाख शुक्लपक्षको द्वादशी तिथि हस्ता नक्षत्र वज्र योग कौलव करण आनन्दादिमा अमृत योग चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ५ः१८ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १८ः४४ मा हुनेछ । प्रदोष व्रत ।
मेष – प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्नेछ । तर पुरानो समस्याले केही झमेला आइलाग्न सक्छ, गोपनीयतामा ध्यान दिँदै सचेत रहनुहोला । दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही नराम्रो होला । यसका बाबजुद बल, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य आदि बढ्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । सार्थक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । ऋण, रोग र शत्रुसित लड्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ ।
वृष – शुभ प्रभावका साथै प्रेमभाव बढ्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव वृद्धि होला । पारिवारिक भेटघाटको समय छ । टाढिएका आफन्तहरू नजिकिनेछन् । विशेष सभा(समारोहमा भाग लिने मौका छ । मानसम्मान पनि पाइनेछ । आमोदप्रमोदमा रुचि बढ्ला । सन्तानको सुख प्राप्त हुनेछ ।
मिथुन – व्यस्तता बढ्नेछ तर मनोकूलको काम बन्नेछ । आर्थिक कार्यमा आकर्षण बढ्नेछ । सानातिना समस्या आइरहे पनि दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ । बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिएर जाला । ऋण रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ ।
कर्कट – नयाँ सम्भावना देखापर्ने छ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । ऋण रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । आत्मीयजनसँग भेटघाट होला । सरसफाइ, वागबगैंचासम्बन्धी काममा आकर्षित होइउला । स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ । परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ । मनोकूलको काम बन्नेछ । सुख शान्ति समृद्धि बढ्नेछ ।
सिंह – समस्याको समाधान मिल्ने दिन छ । पीडा दिनेहरु सक्रिय रहन सक्छन्, सावधान रहनु होला । केही कामका अवसर फुत्कने सम्भावना देखिन्छ, सचेत रहनुहोला । कृषि तथा पशुपालनमा त्यति लाभ नभए पनि व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुने योग छ । आरोग्य वृद्धि हुनेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ ।
कन्या – आय र आरोग्य बढ्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । लगनशीलताले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ । प्रतिभा देखाएर अवसर हातपार्न सकिनेछ । घरमा बसेरै विभिन्न काम सम्पादन गर्न सकिनेछ । चुनौतीहरू पार लगाउँदै रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ ।
तुला – पारिवारि सुख बढ्नेछ । कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । श्रमको उचित मूल्यांकन होला । सन्ततिसुख बढ्नेछ । यात्रापरक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । आशा उत्साह बढ्नेछ । आफन्तको साथ मिल्नेछ ।
वृश्चिक – ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्ला । आय वृद्धि भैरहनेछ व्यवसायका लागि यात्रा सम्भावना छ । लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । विवाद आदिप्रति सचेत भइ अरुको भरमा नपरेर काम गर्नु उचित हुनेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्नेछ । मान पुरस्कार मिल्नेछ ।
धनु – बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बने पनि सहयोगीहरूले हात झिक्नाले केही समस्या थपिने देखिन्छ । धन तत्काल खर्च गर्नुपर्ला छरछिमेकमा केही असमझदारी बढ्ने योग देखिए पनि समाधान भने हुने नै छ । सन्तानसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । रोकिएको धन उठ्ला । भोगविलासमा रुचि बढ्ला । मान महत्व बढ्नेछ ।
मकर – चिताएको काम पुरा नहुन सक्छ तर कृषि तथा पशुपालनमा खर्च बढ्नेछ । आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । सुख सम्पन्नता बढ्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । घुमफिर गर्नुहुनेछ । यात्रामा सफलता पाउनु हुनेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ ।
कुम्भ – आरोग्यतामा वृद्धि हुनेछ । ऋण रोग र शत्रुसित सम्बन्धित काममा सफलता प्राप्त होला । आम्दानी बढ्नुका साथै भौतिक साधन जुटाउन सकिनेछ । दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने काममा हात हाल्ने समय छ। तार्किक क्षमता बढ्नेछ । नयाँ शिप तथा ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला ।
मीन – नियमित काममा सफलता मिल्नेछ । अवसरले पछ्याउनेछन् भने बोलीको प्रभाव पनि बढ्नेछ । धनलाभ होला । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ उठाउने मौका छ । चिताएको काम बन्ने देखिन्छ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । आमोदप्रमोदमा रमीरहनु हुनेछ । आशा उत्साह बढ्ला ।